Faransiiska: Xisbiga Macron oo shaaciyey liiska Musharaxiinta Barlamaanka - BBC News Somali
Faransiiska: Xisbiga Macron oo shaaciyey liiska Musharaxiinta Barlamaanka
Image caption Madaxweynaha la doortay ee farasiiska ayaa shuruuda badan ku xiray Musharaxiinta
Xisbiga madaxweynaha la doortay ee Faransiiska, Emmanuel Macron, uu aasaasay saddex iyo toban bilood ka hor ayaa soo bandhigay liiska musharixiinta dorashada baarlamaanka ee bisha soo socota uga qayb galaya. Xubnahaa uu xisbigu soo sharaxay kala badh ka mid ahi waa dad cusub oo aan hore isugu soo sharaxin xilal siyaasadeed.
Balse xisbigan oo hadda magaciisii loo bedelay Jamhuuriyadda hore u socodka ayaa weli baadigoob ugu jira sidii uu uga soo xulan lahaa boqol iyo konton musharax oo dheeraad ah codsiyada ay soo gudbiyeen sagaal iyo tobanka kun ee qof ee doonaya in ay ka mid noqdaan musharaxiinta xisbiga.
Xisbigan ayaa ka laabtay balanqadkoodi ahaa inay ka tartamaan deegaan kasta oo xubin barlaman ah laga soo doorto, sidoo kalena wuxu ka gaabsaday in uu soo saaro musharaxiin la tartama Ra'isal Wasaarihii hore ee shuuciga ahaa Manuel Valls oo markii hore xisbigu diiday in uu xubin ka noqdo.
Lahaanshaha sawirka EN MARCHE
Image caption Musharaxiintii ugu horeysay ee shaaca la qaaday oo isugu jira dad haysta xirfado kala duwan
Xogahayaha guud ee xisbiga, Richard Ferrand, ayaa sheegay in boqolkiiba 5 xubnaha u tartamayaa ay yihiin xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaanka mudadiisu dhamaanayso, kuwo badan oo kalena ay yihiin musharaxiin aan wax xil ah hore u soo qaban, shan xubnood oo arday ah iyo haweenka oo kala badh ka ah liiska musharaxiinta xisbigu shaaciyey oo tiradoodu tahay 428 qof.
Mr Macron waxaa uu u rajeenayaa in xisbigiisu ku guuleeysto aqlabiyada baarlamanka laakin xsibiga midigta dhexe ee Jamhuuriga ayaa tartan adag kula jira oo doonaya in aanu guushaa helin.